Ciidamadda Soomaaliya oo dib uga baxay degaan ay dagaal ku qabsadeen
Ciidanka Soomaaliya oo ka hayaamay degaan ay dagaal ku qabsadeen
Degaanka Leego ayaa qiyaastii 44 KM waqooyi wuxuu u jiraa degmadda Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
BAYDHABO, Koonfur Galbeed – Ciidamadda kumaandooska Soomaaliya ayaa faarujiyey degaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasoo ay dagaal ugala wareegeen ururka Al-Shabaab, sidda ay sheegeen dadka degaanka.
Dadka degaanka oo lasoo xiriiriyey warsidaha Garowe Online ayaa tibaaxay in askarta ay u ruqaansadeen dhanka saldhiga Balidoogle ee gobolkaas.
"Waxaa ka cabsi qabnaa in Al-Shabaab ay dib ugu soo laabtaan degaanka oo ay xir-xiraan dhalinyaradda ama ay qaarkoodba dilaan sidda ay sameeyaan marka laga saaro degaan oo ay ciidanka baxaan," ayuu yiri qof kamid ah dadka degaanka kaasoo sababo ammaan uga gaabsaday in uu magaciisa la baahiyo.
Saraakiil ka tirsan ciidamadda oo bogga GO la xiriiriyey si ay uga jawaabaan su'aallaha ku geedaaman bixitaankooda ayaanan ka jawaabin telefoonka.
Degaanka Leego ayaa qiyaastii 44 KM waqooyi wuxuu u jiraa degmadda Wanlaweyn taasoo 90 KM u jirta magaala madaxda dalka ee Muqdisho.
Talaabadan ay haatan qaadeen ciidamadan ayaan ahayn mid cusub, balse waa mid soo noqnoqtay oo carqalad ku ah in si wax ku ool ah looga adkaado maleyshiyaadka gacansaarka la leh shabakadda argagixisada Al-Qaacida.
Maamulka Farmaajo ee waqtiga kasii dhacayo ayaa ku guuldareystay in uu ficil u bedelo balanqaadkiisii ahaa in uu dagaalka Al-Shabaab kusoo afjarayo muddo laba sano ah waana mid kamid ah guuldarooyinka uu gabalka ugu dhacayo.
Farmaajo oo amray in ilaalada laga qaado madaxweyneyaashii hore
Soomaliya 15.03.2020. 21:10
Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa kamid ah madaxda ay saameysay arrintaan.
Hogaanka rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo xabsi loo taxaabay
Soomaliya 23.01.2020. 18:34
Doonyo Al-Shabaab "u fududeyn jiray weerarada" oo la burburiyey
Soomaliya 20.01.2020. 06:44
Khasaaraha dhimasho ee qaraxii Muqdisho oo si weyn u korodhay
Soomaliya 29.12.2019. 07:00
Dowladda Soomaaliya oo kaamirooyin cusub ku xirtay jidadka Muqdisho
Soomaliya 16.12.2019. 14:06
Mareykanka oo ka warbixiyey duqeyn uu ka fuliyey Soomaaliya
Soomaliya 09.12.2019. 20:08